Media sy Fanoratan-gazety · Desambra, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Desambra, 2008
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Desambra, 2008
Brunei:Soritroritr’ ‘Ali Baba’
Broney 16 Desambra 2008
Maro ny toeram-pivarotana manohy mivoha hatrany saiky amin’ny faritra maro ao Brioney. Mba hahafantaranao azy mialoha, haka toeram-pisakafoanana iray vaovao isika, dia toeram-pisotroana dité sy kafe iray vaovao, toeram-pivarotana kojakojan-tokantrano iray vaovao, na toeram-pandraharahana ara-barotra goavana iray vaovao, raha tsy hilaza afa-tsy ireo. Fanampin'izay, ny ankamaroan'ireny fandraharahana ireny dia ny...
Kambodza 13 Desambra 2008
Shilia: CNN sy gazetin'olo-tsotra
Amerika Latina 13 Desambra 2008
Juan Dominguez no milaza ny fifanekem-piaraha-miasan'ny olo-tsotra any Shilia manao gazety mitambatra sy ny televiziona vaovao any Shilia CNN Chile [es], ka anisan'ny tafiditra ao anaty fiaraha-miasa ny fandraisana anjaran'ny olo-tsotra manao gazety ao amin'ny televiziona. Eduardo Avila
Thailand: Vahiny tafaraka tamin'ny mpitolona tao amin'ny seranam-piaramanidina
Thailandy 10 Desambra 2008
Nihatakataka niala ireo seranam-piaramanidin'i Bangkok roa herinandro lasa izay ny ankamaroan'ny vahiny. Saingy nisy vahiny iray kosa tao amin'ny seranam-piaramanidina natao fahirano. Niaraka tamin'ny mpanao fihetsiketsehana dimy andro sy dimy alina ilay Finlandey Janus Putkonen. Soa ihany fa nanana fakandahatsary (camera video) izy ka aseho ato izany.
Ezypta: Alaivo sary an-tsaina ny mety ho vitan'ny Ezypsiana 20 000 000
Ejipta 06 Desambra 2008
Ny Mobinil an'i Naguib Sawiris no lohalaharana amin'ny orinasam-pinday any Ezypta. Naka hevitra avy amin'ny dokambarotry Mobinil hoe " alaivo sary an-tsaina ny mety ho vitan'ny Ezypsiana 20 000 000" i Scene & Heard.”
Zamaika: Andro eran-tany natokana ho an'ny SIDA
Fahasalamàna 05 Desambra 2008
Natokana ho andro eran-tany ho an'ny SIDA ny anio [01 desambra], ary amin'ny maha-faritra iray manana tahan'olona somary ambonimbony ihany miaina miaraka amin'ny otrik'aretina VIH/SIDA azy, dia mety halaim-panahy hieritreritra ny maro hoe hiresaka momba azy io ny ankamaroan'ireo mpamaham-bolongana Karibeana – saingy ny tontolon'ny fitoràhana bolongana ao Zamaika irery...